သင်္ကြန်လည်သော ဒိန်းဒေါင်း ရေမြောင်းထဲထိုးကျ - Real News
သင်္ကြန်လည်သော ဒိန်းဒေါင်း ရေမြောင်းထဲထိုးကျ
Comments Off on သင်္ကြန်လည်သော ဒိန်းဒေါင်း ရေမြောင်းထဲထိုးကျ
သင်္ကြန်ဆိုတဲ့ အသံက ကြောက်စရာနေ့ရက်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတော့မလားလို့တောင် ထင်မှတ်ယူရတော့မယ် ထင်ပါတယ်..။ သင်္ကြန် အကြိုနေ့ကတည်း ကြားသိနေရတဲ့သတင်းတွေတိုင်းမှာ စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ် မရှိတဲ့ ယာဉ်တိုက်မှု မယာဉ်မှောက်မှု လူသေမှု များစွာနဲ့ ဆေးရုံတွေမှာလည်း မြောက်များစွာသော လူနာတွေ ရောက်ရှိကြောင်း သတင်းတွေ တွေ့နေရပါတယ်။
ပျော်တာလည်း ပျော်ကြပါ အထူးအထူးလည်း ဂရုစိုက်ကြပါလို့ သတိပေးပါရစေဗျာ.။ တောရောမြို့ပါ မကျန် ပျော်မြူးကြတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်ပွဲ (၁၄.၄.၂၀၁၉)ရက်နေ့သင်္ကြန်အကျနေ့တွင် လပွတ္တာ. သင်္ကန်းကြီး လမ်း ပျဉ်​​ထောင်​တွင်းတံတားအနီး သင်္ကြန်​လည်​ ဒိန်း​ဒေါင်း​ရေ​မြောင်းထဲထိုးကျ မှုဖြစ် စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း ကြားသိရပြန်ပါတယ်..။
တော်ပါသေးတယ် ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ သတင်း မပါရှိလို့ အဆိုးထဲက အကောင်းလို့ ပြောရမှာပါ..။ အားလုံး ဂရုစိုက်ပြီး သတိရှိရှိ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ..။ လေးစားစွာဖြင့်…ApannPyay
Source – လပွတ္တာမြို့ကြီးဘာတွေဖြစ်နေလဲ သင်္ကြန်ကာလအတွင်းမှာဂရုစိုက်မောင်းကြပါ (၁၄.၄.၂၀၁၉)ရက်နေ့သင်္ကြန်အကျနေ့တွင် လပွတ္တာ. သင်္ကန်းကြီး လမ်း ပျဉ်​​ထောင်​တွင်းတံတားအနီး သင်္ကြန်​လည်​ ဒိန်း​ဒေါင်း​ရေ​မြောင်းထဲထိုးကျ
မှုဖြစ် စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့……….
သင်ျကွနျဆိုတဲ့ အသံက ကွောကျစရာနရေ့ကျတှအေဖွဈ ပွောငျးလဲသှားတော့မလားလို့တောငျ ထငျမှတျယူရတော့မယျ ထငျပါတယျ..။ သင်ျကွနျ အကွိုနကေ့တညျး ကွားသိနရေတဲ့သတငျးတှတေိုငျးမှာ စိတျခမျြးမွဖှေ့ယျ မရှိတဲ့ ယာဉျတိုကျမှု မယာဉျမှောကျမှု လူသမှေု မြားစှာနဲ့ ဆေးရုံတှမှောလညျး မွောကျမြားစှာသော လူနာတှေ ရောကျရှိကွောငျး သတငျးတှေ တှနေ့ရေပါတယျ။
ပြျောတာလညျး ပြျောကွပါ အထူးအထူးလညျး ဂရုစိုကျကွပါလို့ သတိပေးပါရစဗြော.။ တောရောမွို့ပါ မကနျြ ပြျောမွူးကွတဲ့ မွနျမာ့ရိုးရာ အတာသင်ျကွနျပှဲ (၁၄.၄.၂၀၁၉)ရကျနသေ့င်ျကွနျအကနြတှေ့ငျ လပှတ်တာ. သင်ျကနျးကွီး လမျး ပဉျြ​​ထောငျ​တှငျးတံတားအနီး သင်ျကွနျ​လညျ​ ဒိနျး​ဒေါငျး​ရေ​မွောငျးထဲထိုးကြ မှုဖွဈ စဉျ ဖွဈပှားခဲ့ ကွောငျး ကွားသိရပွနျပါတယျ..။
တျောပါသေးတယျ ဒီဖွဈစဉျကတော့ ထိခိုကျဒဏျရာရတဲ့ သတငျး မပါရှိလို့ အဆိုးထဲက အကောငျးလို့ ပွောရမှာပါ..။ အားလုံး ဂရုစိုကျပွီး သတိရှိရှိ ပြျောရှငျနိုငျကွပါစေ..။ လေးစားစှာဖွငျ့…ApannPyay
Source – လပှတ်တာမွို့ကွီးဘာတှဖွေဈနလေဲ သင်ျကွနျကာလအတှငျးမှာဂရုစိုကျမောငျးကွပါ (၁၄.၄.၂၀၁၉)ရကျနသေ့င်ျကွနျအကနြတှေ့ငျ လပှတ်တာ. သင်ျကနျးကွီး လမျး ပဉျြ​​ထောငျ​တှငျးတံတားအနီး သင်ျကွနျ​လညျ​ ဒိနျး​ဒေါငျး​ရေ​မွောငျးထဲထိုးကြ
မှုဖွဈ စဉျ ဖွဈပှားခဲ့……….